वेक अप ‘बेबी’ !- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
वेक अप ‘बेबी’ !
फ्लोरिडा, अमेरिकामा जन्मेका जिम मरिसन (सन् १९४३–१९७१) छोटो आयु बाँचेर पनि चिरस्मरणीय बनेका संगीत–साधक हुन् । डिसेम्बर ८ (मरिसनको बर्थ–डे) उनका प्रशंसकका लागि विशेष दिन हो ।
पुस ५, २०७६ सरिता तिवारी
रिडिङ योर पोयम्ज  । आई नेभर गेस्ड, यु ह्याब रिटन एनी पोइम अबाउट जिम मरिसन !... स्याल्युट !रातको झन्डै पौने बाह्र बजे  । मध्यरातमा कुनै तारा खसेझैं आकस्मिक मेसेज बक्समा खसेका थिए यी शब्द । निद्राको परत जम्न लागेका आँखाको सतह एकाएक जुरुक्क उठ्यो । सुत्ने तर्खरमा जुम्सो भैरहेको मेरो अवचेतनमा रक शैलीमा गुन्जिए आदिम परिचयका प्रिय शब्द ...‘वेक अप !’ प्रतिक्रियामा एउटा विनम्र धन्यवाद पठाएँ ।
एउटा युगको, सामाजिक र आर्थिक दुवै कोणबाट एउटा अधीर कालखण्डको चेतना बोक्ने सर्जकका नाममा एक चिर्कटो कविता लेखेर मैले कुनै तीर मारेको होइन । यति त मलाई थाहा छ ।
उताबाट प्रशंसा र प्रेमका अरू थप शब्द आए । इमोजी बक्सबाट दुई थान स्माइली तानेर पठाएँ ।
मेरा पाठकले पठाएको त्यो ‘सलाम’ मेरो एउटा लघुकाय कविताका लागि कम तर एउटा महान् स्रष्टाको चिरन्तन स्मरणका लागि ज्यादा हो । कलाको जरुरत र मूल्यको साक्ष्य हो त्यो सलाम । संगीत र साहित्यले मिलौं दूरीहरूका सीमा नाघेर मानवता र सत्यको खोजमा हिँडेका मान्छेहरूबीच गर्ने संवादको पनि साक्ष्य हो
त्यो सलाम ।
यही डिसेम्बर ४ को मध्यरात थियो त्यो । एकपल्ट फेरि सुन्न मन भयो, ‘वेक अप !’ फेरि सुन्न मन भयो, ‘वुमन इन द विन्डो’ । फेरि सुन्न मन भयो ‘द इन्ड’ ,’राइडर्स अन द स्ट्रोम’...! यस्ता शब्द जसका सुन्दरता पनि भयावह छन् । यस्तो संगीत, जसको भयावहता पनि सुन्दर छ । अभिभूत भएँ । दिल दिमागको सुदूर कुनासम्म पुग्ने गरी आनन्दित भएँ । र, धेरै दिनदेखि तन्द्रामा उँघिरहेको आफूभित्रको मान्छेलाई च्याँठ्ठिएर जगाएँ, ‘ओए केटी उठ् ! जस्ट वेक अप !’
कुनै कविताले बीसौं वर्षपछि प्राप्त गरेको ‘नोटिस’ का खास अर्थ हुन्छन् । र, यो डिसेम्बर महिना हो । अनि, त्यही मध्यरातको जाग्रत चिच्याहट नै यो संस्मरणको प्रस्थान हो ।
‘वेक अप’ अमेरिकामा सन् साठीको मध्यमा जन्मिएको रक ब्यान्ड ‘द डोर्स’ को सिग्नेचर गीत हो । दिमागका तारहरू झन्झनाएर एकपल्ट आफ्नै गालामा झापड हनाउने गीत । जुन गीत सुन्नुभन्दा दशकौंअघि त्यसबारे पढेर म प्रभावित भएँ । जुन गीतका शब्दभन्दा अघि भावको व्याख्यामा डुबेर रन्थनिएँ । जुन गीतका गायकको फोटोसम्म नदेख्दै म उनको एक अविचल प्रशंसक भएँ । रोचक कुरा के भने, मात्रै एउटा आलेखले दिएको सीमित सूचनाका भरमा जसका गीतको भाव र संवेदनाले लेख्न प्रेरित गरे मलाई उही श्रष्टामाथिको प्रेमले समर्पित— कविता ।
सप्रसंग— मेरो कवि हैसियतको दोस्रो किताब थियो— अस्तित्वको घोषणापत्र (२०६७) । हैसियत किन भनेको भने, कवि (शब्दकर्मी) हुनु मेरा लागि सत्य खोज्ने, सत्यमार्गी बन्ने असाधारण बाटो रोज्नु हो । ढाँटेर बाँच्न त असंख्य विकल्प छन् । छाती फुकाएर निर्धक्क बोल्न, निडर र आफ्नै विश्वासको मस्त संसारमा बाँच्नका लागि नै म लेख्ने उद्यममा छु । मलाई यस्तो ठान्ने बनाउने तिनै मान्छेहरू हुन् जसले सत्य खोज्नु, भेट्नु र संसारले त्यो थाहा पाउनुको मूल्यमा जिन्दगी गुमाए । जो आत्माको बोली ओकल्नुको प्रतिदानमा दुनियाँबाट अविश्वसनीय त्रासदी र भयावह मृत्युका कथा लिएर बिदा भए ।
म किताबको कुरा गर्दै थिएँ ।
त्यस किताबसँग मेरा धेरै अपेक्षा थिएनन् । तर, प्रकाशनपछि अधिकांशले त्यो किताब रुचाएको प्रतिक्रिया दिए । शब्दको संसारमा खासै नपत्याइएको कविलाई यो अनपेक्षित सुखद खबर थियो । तर, यो संग्रहमार्फत नै मलाई रुचाउन सुरु गरेका कतिपय पाठक (कवि) हरू पछिल्ला दिनमा ‘नियोजित रूपले स्टन्टबाजी गर्न ‘अश्लील’ र क्रूर शब्दसँग खेलिरहेको’ मा, कविताबाट ‘एजेन्डा लेखन’ गर्न थालेकामा मसँग खुबै दुःखी छन् । ती अहिले पनि यदाकदा तिम्रो फलानो किताब नै राम्रो हो भन्दै यो किताबको प्रशंसा गर्छन् ।
उनीहरूले यसो भन्दा म खास प्रतिक्रिया गर्न आवश्यक ठान्दिनँ ।
अफसोस केमा लाग्छ भने उनीहरू आफूलाई कविताका मर्मज्ञ दाबी गर्छन् तर आज ‘स्टन्ट’ गरिरहेको कविका विगतका कवितामा विद्रोह र विरुद्धको कुनै धूवाँ देख्दैनन् ! प्रतिबद्ध प्रतिरोधको पूर्वाभास भेट्दैनन् । लेखक बन्न हिँडेको एउटा मान्छेभित्र विचारको ‘क्रमिक विकास’ पनि हुँदो हो । त्यति बुझ्न कसैलाई चार्ल्स डार्बिन बन्ने दुःख पनि गर्न नपरिहाल्दो हो । तर, कसैसँग यसरी सोचिदिने फुर्सद र उदारता खोज्ने मूर्खता म गर्दिनँ, कम्तीमा यतिबेला । हरेक रुचि र अरुचि व्यक्तिगत आग्रह र दुराग्रहका विषय मात्रै होइनन्, राजनीतिक पनि हुन् भन्ने अब त म राम्रैसँग बुझ्छु । खैर, त्यस किताबभित्र केही व्यक्तिमाथिका कविता पनि छन् ।
ती व्यक्ति जसले कुहिरोभित्र हराइरहेको मेरो युवावयलाई विचारको कोलाजले नयाँ, फरक र धारिलो बनाइदिए । धारणाहरूको अनन्त ‘जिगज्याग’ मा हेलिँदै गरेको मेरो दिमागलाई म आफैंले नसोचेको दिशा दिए । यस्ता व्यक्तिमध्ये जिम मरिसन, अलेन गिन्सवर्ग, अवतार सिंह पाश, पारिजात आदि थिए । मलाई यी स्रष्टामाथि कविता नै लेखिहाल्ने रहर किन जाग्यो ? म जान्दिनँ । त्यसरी लेखिएका सबै कविता ०५६/०५७ सालतिर पोखरा छँदै लेखिएका हुन् । तीमध्ये केही किताबमा छापिए, केही अझै पनि डायरीमै छन् ।
पोखरा । यसको छवि भयावह रूपले सम्मोहक कुनै ‘एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट’ जस्तो छ मभित्र । यसले धेरै कुरा दिएको छ मलाई । धेरै थोक चिनाएको छ । केही सुन्दर, मोहक कुराहरू अनि केही गहिरा विषाद पनि ।
र, त्यही ‘एब्स्ट्र्याक्ट’ कथामा कुनै दिन जिम मरिसन उपस्थित भए क्रान्तिकारी आत्मघातीको विम्ब लिएर । मलाई यी दुर्लभकोटी स्रष्टासँग पहिलो साक्षात्कार गराउने व्यक्ति कवि बानिरा गिरी हुन् । विश्वका प्रमुख साहित्य, कला र संगीतमाथि उनको परख कति समृद्ध र सघन थियो भन्ने थाहा पाउन उनका फुटकर लेख नै पर्याप्त लाग्थे । म उनलाई पढ्दा आनन्दित हुन्थें । हिजोआज अल्जाइमर्सको बिमारीले आफ्नै विगत र वर्तमान समेत बिर्सिएर भौतिक रूपले दयनीय भइरहेकी वानीरा गिरी तिनताका सक्रिय स्तम्भकार थिइन् ।
त्यतिबेला म दिदीसँग बस्थेँ । पृथ्वीनारायण क्याम्पसको गेटैनेर दिदीको बुक स्टल थियो । मानविकीको विद्यार्थी म । शब्दको मोह बहुतै थियो । पढ्ने भोक र कविता लेखेर सुनाउने लोभ उस्तै । बुक स्टलमै बित्थ्यो धेरै समय । पत्रपत्रिका खुबै पढिन्थ्यो । अखबारका पानामा जिम मरिसन चित्रले होइन, शब्दमा कुँदिएका बयानले ठोक्किए मसित । वानीरा गिरीका शब्दमा जिम आधुनिक संगीतका कोहिनूर थिए । शक्तिशाली आवाजका जादुगर थिए । जिमका जागरण गीत सुषुप्त अवस्थामा रहेको मान्छेको चेतना जगाउने साइरनजस्ता थिए । उनले ‘द डोर्स’ ब्यान्डको सफलता फ्रन्ट म्यान जिम मरिसनको अद्भुत कलाचेत र अन्तर्मनबाट उद्भूत सत्यको प्रकाशनका कारण सम्भव भएको भन्दै लेखेकी छन्, जिम मरिसन साँच्चै नै ज्ञात र अज्ञातबीचको ढोका बनेर बाँचे...
जस्तो कि जिम आफैं भन्थे–
देअर आर थिङ्स नोन
एन्ड देअर आर थिङ्स अननोन
ह्वाट द सेपरेट्स देम इज द डोर
एन्ड द्याट्स् ह्वाट आई वान्ट टु बी
आई वान्ट टु बी द डोर !
जिमलाई आफूमा आत्मसात् गर्ने यी शब्द साँचेर मात्र बसेँ म । उनलाई सुन्ने, महसुस गर्ने र उनका शब्दको संवेगभित्र एकाकार हुने समय आउन मैले दशक बढी कुर्नुपर्‍यो । उनको जादुयी आवाजको कम्प, उनका भावको शक्ति र संवेदनाको गहिराइमा पुग्ने भौतिक ल्याकत र साधन मसँग थिएनन् । पैसा, ज्ञान, सम्मान र पहुँच वर्गीय मात्रै छैनन्, लैंगिक पनि छन् भन्नका लागि मसँग यस्ता अनुभव धेरै छन् । विवाह र सन्तान जन्मका ‘स्पिडब्रेकर’ हरूकै बीचमा पनि मभित्र जिम र उनीजस्ता अरू थुप्रै मानिस जिउँदै थिए । यो कम अर्थपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
नियमित तलब थाप्ने जागिर खाएपछि सबैभन्दा पहिले किन्नु थियो मलाई ल्यापटप । त्यो फुर्सदको तलतल मेट्ने केवल एउटा आयताकार वस्तु थिएन मेरा लागि । संसार चिन्ने, संसार भेट्ने ढोका थियो । यही ढोकाबाट छिरेपछि बल्ल मैले जानें, कस्ता थिए जिम ? उनका शब्दले रचेको संसार कस्तो थियो ? उनका गीतले के भन्छन् ?
सन् साठीको दशकको मध्यपछिका वर्षहरूमा कला दुनियाँलाई आक्रामक रूपमा हस्तक्षेप गरेर सत्तरीको दशकको थालनीमै बितिजाने जेम्स डग्लस (जिम) मरिसन उच्चकोटीका साधक थिए । बीसौं शताब्दीका दुर्लभ र दुस्साहसी गायकमध्ये एक थिए । उम्दा गीतकार र कवि थिए । क्लासिकल रक संगीतमा उनले बनाएको स्पेस छुट्टै छ । खास छ ।
चार वर्षको छँदा देखेको भयानक सडक दुर्घटनाको स्मृतिले आजीवन लखेटिएका यिनी स्कुलकालदेखि नै ‘अफबिट’ छात्रमा गनिन्थे । कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट फिल्म अध्ययनमा स्नातक सकाउन्जेल बाईसवर्षे तन्नेरी जिमले आफ्नै पहलमा रे मान्जरेक, रोबी क्रिजर र जोन डेन्समरसँग मिलेर ‘द डोर्स’ नामक सांगीतिक समूहको निर्माण गरे । ज्याज, रक, ब्लुज र लोक सबै किसिमका संगीतको आत्मा छामेका यी चार भाइले जे गाए, जसरी गाए त्यसले साठीको दशक हल्लियो । त्यसको पराकम्प अझै उस्तै छ । आफूलाई उत्पात सभ्य र शिष्ट भनाउने मानिसहरूलाई जिमहरूले गाएका गीत अश्लील र छाडा पनि लाग्न सक्छन् । कसैलाई यस्तो लाग्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । तर, कुरा के भने उनीहरूले जसरी समयको जटिल यथार्थलाई अति मिहिन र मूर्त ध्वनि दिएर छोडेका छन् त्यसको गहिराइ र फैलाइ ठम्याउन तिनका एक एक शब्द ध्यानस्थ सुन्ने धैर्य र उदारता चाहिन्छ । उनीहरूले बाँचेको युगका संकट चिन्ने दृष्टि चाहिन्छ ।
युद्धोपरान्त विश्वका आर्थिक, सामाजिक संकट, शीतयुद्धका सांस्कृतिक उत्तरदान र भियतनाममा पोखिएको अमेरिकी युद्धोन्मादको आलोचना, प्रेम र मानवताको रक्षा गर्ने अपिल अनि भयावह आगतको चिन्ता ‘द डोर्स’ का गीतहरूमा भेटिने मूल कथ्य हो । एकल धार्मिक, एकल जातीय राष्ट्रवाद र नश्लीय एकत्ववादको विष फैलिरहेको वर्तमान समयमा द डोर्सका गीतहरू झनै प्रासंगिक छन् । ‘वेक अप’, ‘द इन्ड’, ‘वुमन इन द विन्डो’, ‘राइडर्स अन द स्ट्रोम’, ‘एल. ए. वुमन’ लगायतका गीत यसकारण कालजयी छन् । यीमध्ये प्रायः गीत जिम रचित हुन् ।
जिमका सुरुआती आदर्श थिए अस्तित्ववादी विचारक नित्से । पछि आर्थर रिम्बाउन्ड, फ्रान्ज काफ्का, बाल्जाक, ज्याक केरुवाक, अलेन गिन्सवर्ग इत्यादिको मिश्रित प्रभावले यिनका रचना मिथक, इतिहास, वर्तमानका त्रासदी र भयकारी भविष्यकथनले भरिएका छन् । आलोचकहरू यिनलाई सपना र दुस्वप्नका अभूतपूर्व गायक मान्छन् ।
सन् १९४३ को डिसेम्बर ८ मा अमेरिकामा जन्मेका जिम जम्मा सत्ताईस वर्ष बाँचेर १९७१ जुलाईमा बिते । यति छोटो जिन्दगीलाई आउँदा अनेकौं पुस्ताका लागि लोमहर्षक बनाएर छोडेका यिनी गतिशील स्वप्नदर्शी र उदात्त दुनियाँका परिकल्पनाकार थिए । अफसोस नै भन्नुपर्छ, उनको अति सिर्जनशील र रहरलाग्दो उमेरलाई अल्कोहल र ड्रग्सको भयंकर कीराले निलेर खाइदियो । व्यक्तिगत जीवनका कठोर उहापोहले दिएको मानसिक तनाव, अलगाव र एक्लोपनले दुर्व्यसनको उत्कर्षमा पुर्‍याएर उनलाई आत्मघात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदियो ।
धर्तीमा जिम मरिसनजस्ता अनेक स्रष्टा आए र गए । तिनले उच्च सिर्जनशील तर भयावह सकसको जिन्दगी बाँचे । सत्य खोज्ने तिर्खाले तिनलाई आत्महन्तासमेत बनाइदियो । यो दुःखद कुरा हो । यति ठूलो संसार उनीहरूजस्ता मान्छेका लागि किन यतिविधि साँघुरो हुन्छ ? तिनले कल्पना गरेजस्तो फराकिलो दुनियाँ बनाउने सामर्थ्य छ हामीसँग ?
जस्तो कि, ‘द इन्ड’ मा भनिएको छ–
के तिमी अनुमान गर्न सक्छौयति धेरै स्वतन्त्र र अनन्त
कुनै अपरिचितको दुस्साहसिक खोज...
जिमहरूले छोडेर गएका प्रेम, घृणा, आक्रोश र जागरणका लय छन् हामीसँग । अवचेतनमा सुषुप्त बसेर ती मध्यरातमै पनि जुरुक्क ब्युँझाउन आउँछन् । चरम अकर्मक भावले निदाउरो भएको बेला च्याँट्ठिएर बोलाउँछन्, ओई उठ्....!
जस्ट वेक अप...बेबी !
प्रकाशित : पुस ५, २०७६ ११:१८
मंसिर २४, २०७६ सरिता तिवारी
लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान चलिरहेको छ देशभर, विश्वभर । यहीबीच पनि हिंसाका मथिङ्गल खलबल्याइदिने घटना सुनिइरहेकै छन् । गएको हप्ता ‘दहेज’ का नाममा मारिएकी सन्जुदेवी र प्रताडित रमिता रायका आङै सिरिङ्ग पार्ने कथादेखि छाउगोठमा निसासिएर मर्ने पार्वती बुढा रावतको मुटु हल्लाउने व्यथासम्म पढेर बित्यो । यद्यपि यी घटना नयाँ होइनन् । विगतदेखि आजसम्म पीडितका नाम र उमेर मात्र फरक छन् । अधिकांशतः हिंसाका रूप उस्तै, उही छन् ।
बहालवाला गृहमन्त्रीले केही महिनापहिले भनेजस्तै, निर्मला काण्ड जस्ता घटना हिजो पनि भएकै हुन्, आज पनि भइरहेकै छन् । तर गृहमन्त्री थापाको झैं पंक्तिकारको हृदय यति कठोर छैन कि छाती चिरिने यस्ता घटना भविष्यमा पनि भइरहेको कल्पना गरूँ । बरु कामना छ, भोलिका दिनमा यस्ता समाचार किमार्थ सुन्न र पढ्न नपरोस् !
हुन त यसरी कुरा गर्नासाथ ‘पुरुष पनि पीडित छन्’ वा ‘पुरुष मात्रै हिंस्रक छन् र ?’ भन्नेजस्ता छिर्के प्रश्न तेर्स्याएर मुद्दाको विषयान्तर गर्न रुचि राख्ने मानिसहरूको पनि कमी छैन, तर महिलामाथिको घरेलु लगायत हिंसाको प्रचलित आमरूप अपवादका रूपमा पुरुषमाथि ‘पनि’ हुने हिंसाभन्दा कैयौं गुणाले बढी छ । हिंसा र पाशविकता कसैका लागि र कहीँ पनि स्वीकार्य हुँदै होइन । तर महिलामाथिको हिंसा व्यवस्थाजन्य हो, संरचनात्मक हो र यो पितृसत्ताका विभिन्न रूपमा अडिएको छ भन्ने हेक्का राखिनु जरुरी छ ।
‘बलात्कारविरुद्ध ऐक्यबद्धता’ को नारामा १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला नेपालमा छाउगोठमा मृत्युको समाचारसँगै भारत र इरानका दर्दनाक खबर बाहिर आए । सूचनाको पहुँचमा रहेमध्येका केहीले अछामको तुर्माखाँदकी पार्वती बुढा रावतको मृत्यु र भारतको हैदराबादमा घटेको बर्बर बलात्कारको घटनामाथि कडा आक्रोश पोखे । तर धेरैले यस्ता खबरमाथि प्रतिक्रिया देखाउन जरुरी ठानेनन् । कतिलाई यस्ता विषय केवल महिलाका ‘इस्यु’ हुन् भन्ने लाग्छ । तिनलाई के पनि लाग्छ भने, यस्ता प्रकरणमा बोलिरहनु, लेखिरहनु केही ‘बिल्लाधारी’ अधिकारकर्मीको मात्रै ‘ड्युटी’ हो । त्यसो त अधिकांशका लागि सामाजिक सञ्जाल निजी उपलब्धि र आडम्बर प्रदर्शनीको थलो नै बढी भएको देखिन्छ । त्यस्तो वर्गका मान्छेहरूलाई समाजको कुनै पनि किसिमको त्रासदीले केही फरक पार्दैन । बाँकी कतिपयका लागि भने यस्ता खबरसँग ठोक्किनु मात्रै पनि ‘नकारात्मक तरङ्गले मुड अफ’ हुनु हो । तिनलाईआफ्नो खुसी र ‘मुड अन’ दैनिकी कसैको चीत्कार, प्रलाप, हत्या र कुनै पनि किसिमको हिंसाको खबरभन्दा बढी मूल्यवान् लाग्छ ।
हुन त सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त सहानुभूति, संवेदना र रोषमै पनि व्यक्तकर्ता स्वयम्को इमान र संवेदनशीलता कति छ भन्ने कुरो शंकाकै घेरामा रहन्छ । बलात्कार लगायत लैंगिक हिंसाका प्रतिक्रियामा सामाजिक सञ्जालमार्फत हाम्रो संवेग र आक्रोशको अनुपात अघिपछिका तुलनामा घटनालगत्तै ह्वात्तै बढ्ने गर्छ । यसरी व्यक्त हुने संवेदनालाई अन्यथा नै त नमानौं, तर त्यसपछि के ? सहानुभूति र आक्रोशका चार वटा शब्द व्यक्त गर्दैमा विवेकवान् मान्छेको भूमिका सकिँदैन । व्यक्तिगत वा सामूहिक स्तरमा आफूबाट सम्भव हुने प्रगतिशील कदम चाल्न र सकर्मक अभियानसमेत थाल्न सके मात्र हाम्रा आक्रोश अर्थपूर्ण हुन्छन् ।
हाम्रा आक्रोश तबसम्म व्यर्थ छन्, जबसम्म हामी महिलामाथिका सबै खाले हिंसाको नाभि पितृसत्तासँग जोडिएको छ भन्ने बुझ्दैनौं, जबसम्म हामी आफ्नै जीवन व्यवहारका साना–साना कामबाट समेत लैंगिक विभेद र हिंसामुक्त समाज बन्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत हुँदैनौं, जबसम्म हामी सांस्कृतिक रूपमै महिलाको अधीनस्थ भूमिका फेरेर लैंगिक समता स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुँदैनौं, जबसम्म हाम्रो दैनन्दिन आचरणमा महिलामैत्री सम्यक् उदारताको अभ्यास गर्दैनौं । यो पुरुषले मात्रै होइन, स्वयम् महिलाले पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने कुरा हो ।
यस पटक लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका क्रममा बलात्कारविरुद्धको प्रतिरोध गीतका रूपमा ‘अ रेपिस्ट इन योर पाथ’ को भिडियो भाइरल भैरहेको छ । चिलीका युवा महिलाहरूले स्यान्टियागो सहरमा आँखामा कालो पट्टी बाँधेर गरेको प्रदर्शनीका क्रममा गाएको यो गीतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘फेमिनिस्ट एन्थेम’ का रूपमा लोकप्रियता हासिल गरेको छ । सुरुआतको चिलियन कोरियोग्राफीकै शैलीमा मेक्सिको, कोलम्बिया, अमेरिका, डोमिनिक रिपब्लिक, फ्रान्स, स्पेन, बेलायत हुँदै संसारभरका प्रदर्शनकारी महिलाहरूले सडक प्रदर्शनका क्रममा यो गीत गाएका छन् । गीतका आक्रामक शब्द र विरोधको नयाँ शैलीबाट प्रभावित धेरैले यसको भिडियो सेयर गरिरहेका छन् ।
गीतले भनेको छ— ‘पितृसत्ता बलात्कारी हो । यसका हाँगाहरू न्यायालय, प्रहरी, संसद, राजनीतिक दल जसले पीडकको संरक्षण गर्छन्, दण्डहीनताको शासन चलाउँछन्, ती सबै बलात्कारी हुन् । न म अपराधी हुँ, न मेरो पहिरन, न म भएको ठाउँ । अपराधी त यो दमनकारी राज्य हो, अपराधी त बलात्कारी पुरुष हो ! ...’
रोचक के भने, यो गीतका शब्द र भावको आक्रामकता मन पराउने महिलाको संख्या जति छ, त्यति नै पुरुष पनि छन् । यो भिडियोमा युट्युब र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त पुरुषहरूका प्रतिक्रिया देख्दा असल र न्यायप्रेमी पुरुष वर्गप्रति सम्मानले मन भरिन्छ । यो एउटै गीतको ध्वनिले भावनात्मक रूपमा ऐक्यबद्ध बनाएको वैश्विक वृत्त नारीवाद र मानवतावादको तान कसरी, कहाँनेर जोडिएको छ भन्ने देखाउन समर्थ भएको छ ।
बलात्कारविरुद्ध यसरी विश्वव्यापी अभियान चलिरहँदा संसारमा यस्ता देश र यस्ता कानुन पनि छन्, जहाँ बाँकी विश्वका अभियान र आन्दोलनको प्रभाव नगण्य छ । त्यहाँको कठोर कानुनले चलिरहेको बन्द समाजभित्रका महिलाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । उदाहरण, अघिल्लो हप्ता मात्रै इरानको दक्षिण–पश्चिमी प्रान्त कुज्वेस्तानमा ३३ वर्षीया सोम्योह शाहबजीलाई दिइएको मृत्युदण्डको खबरलाई लिन सकिन्छ । उनको दोष थियो— आफूलाई बलात्कार गर्न खोज्ने व्यक्तिको हत्या गर्नु । आत्मरक्षाका क्रममा भएको त्यो हत्याको बदलामा उनलाई ६ वर्ष लामो जेल सजायले नपुगेर फाँसीसमेत चढाइयो । वर्तमान राष्ट्रपति हसन रुहानीको कार्यकालमा उस्तै प्रकृतिको ‘अपराध’ मा दिइएको यो ९८ औं मृत्युदण्ड हो । उनीभन्दा अघि बलात्कारका क्रममा आत्मरक्षा गर्दा भएका हत्याको अभियोगमा ९७ महिला फाँसी चढिसकेका छन् । कस्तो विडम्बना ! कस्तो देश ! कस्तो समाज ! जहाँ बलात्कारलाई सही र जायज मानिन्छ र त्यसको प्रतिरोधमा आत्मरक्षा गर्दा उल्टै पीडित नै मारिनुपर्छ ! जहाँ महिलाको सम्मान, आत्मरक्षा र प्रतिष्ठाभन्दा कुनै बलात्कारी पुरुषको जीवनलाई कता हो कता महँगो मान्ने कानुन छ !
भारतको हैदराबादमा केही दिनअघि भएको एक डाक्टरको बलात्कार र हत्यापछि आएका प्रतिक्रियामध्ये एउटा रोचक तर विडम्बनापूर्ण प्रतिक्रिया छ, तेलगु फिल्मकर्मी ड्यानियल श्रवणको । तिनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए (जुन अति आलोचनापछि मेटाए)— ‘बलात्कारपछिको हत्याका मुख्य दोषी समाज र महिला संगठन हुन्, न कि वास्तविक अभियुक्त । समाज र महिला संगठनको भयले पुरुष बलात्कारपछि हत्या गर्न उद्यत हुन्छ । त्यसैले बलात्कारपछिको हत्यामा कमी ल्याउन सरकार, संसद र न्यायालयले हिंसाबिनाको बलात्कारलाई वैध मानिने विधेयक पास गरून् ।’ उनको लामो पोस्टको मजबुन थियो— बलात्कार वैध हुनुपर्छ । महिलाले बलात्कारीलाई ‘को–अप’ गरिदिए ज्यान त बच्थ्यो ! मानौं महिला यति मूल्यहीन वस्तु हुन्, जो एउटा ज्यान बचाउने सर्तमा जतिखेरै, जहीँ पनि र जोसुकैको यौनको भोक मेट्न चुपचाप तयार हुनुपर्छ । हदैसम्मको प्रदूषित र निकृष्ट दिमागबाट मात्रै निस्कन्छ यस्तो तर्क । सात महिनादेखि सत्तरी वर्षसम्मका महिलालाई केवल स्त्री शरीरभन्दा बढी नदेख्ने वासनाको भोको सोचले मात्रै गर्छ यस्तो तर्क । कवि वानीरा गिरिको ‘आइमाई’ कविताले भनेझैं— ‘...अर्को/अगम्य–स्थल योनिको/अर्द्घ–रहस्य थाहा पाएर/उफ्रँदै चिच्याउँछ— ए, सुन सुन/आइमाई भन्या जाबो एउटा प्वाल रहिछ !’ स्त्रीको योनिलाई सिर्जना र निर्माणको उद्गम होइन, केवल एउटा मांसल प्वाल ठान्ने रोगी मनोवृत्तिबाट मात्रै निस्कन्छ यस्तो तर्क ।
कतिपय विदेशी मिडिया र युट्युबमा देखिन्छ, बहस गर्न असमर्थ भएपछि उच्च बौद्धिक महिलाहरू, लेखक, राजनीतिकर्मी आदिलाई समेत बलात्कारको धम्की दिने गरेको ! पितृसत्ताका खाँटी नश्लका सन्तति हुन् ती । तिनको चेतनाको विरासतमै छ हिंसा र बर्बरता । तिनलाई सुधार्न हिँड्नु त्यति सहज र सम्भव लाग्दैन । यतिखेर सुधार र व्यावहारिक प्रतिबद्धताको अपिल न्यायप्रेमी र विवेकधर्मी वर्गसँग नै गर्न सकिन्छ । बलात्कार लगायतका सबै खाले लैंगिक हिंसाका अमानवीय र निकृष्ट कृत्यको न्यूनीकरण न्यायिक समाज निर्माणको प्रतिबद्ध प्रयासले हुने हो । र, यस्तो प्रयास हामी जोकसैले जहीँकहीँबाट थाल्न सक्छौं ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४२